Iidolophu ezintle zonxweme ezinomtsalane zaseAndalusia | Iindaba Zokuhamba
Iidolophu ezintle ezinonxweme zaseAndalusia
Susana Garcia | | España, ngokubanzi
I-Andalusia yenye yezo ndawo apho sinokufumana iindawo ezininzi zokutyelela, ukusuka kwiidolophu ukuya iidolophana ezinomtsalane, ngakumbi imimandla eselunxwemeni apho ungonwabela imozulu entle. Kungenxa yoko le nto siza kukhangela ezo dolophu zithandekayo zonxweme ziseAndalusia.
Los iidolophu eziselunxwemeni zaseAndalusia Basinika iindawo ezininzi ezinomtsalane kwaye, ngaphezulu kwako konke, iilwandle ezintle zokutshiswa lilanga. Ezinye zeedolophu eziselunxwemeni zisizisela imifanekiso yaseAndalusi, kwaye ngokubanzi zonke zibakhenkethi kakhulu, kuba akukho kona yalomhlaba unobuhlobo ongaziwayo.
Siqala ngesixeko esisizisela isitampu esiqhelekileyo kweyona dolophu intle eAndalusia. Izindlu ezimhlophe zigubungele encotsheni yentaba ejonge elwandle nasekupheleni kweSierra de Cabrera. Yidolophu entle kakhulu, enezindlu ezimhlophe ezimenyezelayo ezimileyo kangangeenkulungwane, nezibonileyo iilali ezininzi zidlula, zisuka kumaFenike ziye kumaRoma. Enye yezinto ekufuneka uyenzile kule dolophu kukulahleka kwizitrato ezimxinwa, wonwabele umhlophe wezindlu ngokuchaseneyo neblue yezulu kunye neentyatyambo ezimibalabala kwiibhalkoni. Umthombo waseMora yenye yeendawo zawo zembali, apho isixeko sanikezelwa kwiiKumkani zamaKatolika. Unako nokuhamba ngokuhamba kwindlela yeLa Mena, ejonge elwandle.
INíjar yidolophu encinci, nangona ixesha likamasipala libanzi. Yenye ilali yezindlu zabamhlophe ezibekwe kunxweme, kufutshane nezidumileyo Ipaki yendalo yeCabo de Gata. Ukusuka kule ndawo ungandwendwela inkqantosi yaseTabernas, apho kwiifilimu zangaphambili zeenkomo zacinywa Le dolophu ibonelela ngendawo enabakhenkethi kakhulu kunye neelwandle ezintle ezikufuphi, nangona ilifa lenkcubeko linqabile ngenxa yokuba yindawo eyaphangwa ngabaphangi kangangeenkulungwane. Imbali yesiphithiphithi, nangona kunjalo, ayiyikhululi ekubeni yidolophu enomtsalane namhlanje enandipha ukhenketho olukhulu.
INerja yidolophu eyaziwa eSpain ngokuba yindawo apho uninzi lweziqendu zothotho lweentsomi 'Verano azul' zacocwa khona. Ukuba siza kutyelela idolophu singakonwabela ukhenketho olukhokelwayo ukuze sibone useto apho ezi ndawo zafotwa khona. Ukongeza, kukho umzobo wenqanawa enkulu yaseChanquete. Enye yezinto zasentsomini ezinokwenziwa kule dolophu yile Ndwendwela iBalcony yaseYurophu, ngeembono ezintle zolwandle. ILa Cueva de Nerja yenye yezinto ekufuneka ityelelwe, kwaye embindini wedolophu singonwabela iivenkile zokutyela kunye neevenkile zesikhumbuzo.
Le yenye yezo dolophu zithandekayo zaseAndalusi, zinezindlu ezintle ezimhlophe ezihonjiswe ngeentyatyambo kunye nezitya zeceramic. Kule ndawo ungonwabela ukubonwa okuhle kolwandle, kunye nenqaba ebekwe kwindawo ephezulu yedolophu, apho kukho umbono omangalisayo. Yi Inqaba yamaMoor ukusuka kwinkulungwane ye-XNUMX phezu kwelitye elalithi kumaxesha kaNasrid libe yintolongo yasebukhosini. Kufuphi nenqaba kukho icawe yaseVirgen del Rosario, umsebenzi waseMudejar kwinkulungwane ye-XNUMX.
I-Tarifa yenye yezona ndawo zokhenketho eAndalusia, ke sinenye yezo ndawo ekufuneka undwendwele ubuncinci kube kanye. Kule ndawo kukho IBolonia kunye neValdevaqueros iilwandle. Siza kuqonda ukuba iTarifa yindawo yemidlalo yezamanzi, kunye neekiti zekitesurfing ezingamakhulu ezibhakabhaka. Ukongeza, sinokwenza utyelelo olunomdla, njengeNqaba yeGuzmán ukusukela kunyaka wama-960 osagcinwe kakuhle. Nandipha iimbono ezimangalisayo zeMirador del Estrecho, apho sinokubona khona unxweme lwaseAfrika.
I-Estepona yenye yezo dolophu zinomtsalane ongenakuthelekiswa nanto waseAndalusi. Indawo yokuhamba ngokuzolileyo ezitratweni zayo, onwabele ikona nganye encinci. Inkqubo ye- Isikwere seentyatyambo kwidolophu yakudala iphila ngokuvisisana negama layo, ineentyatyambo ezintle ezimibalabala ezihombise ngeyona ndlela intle. Sinokundwendwela nezinye izikhumbuzo kwindawo yakudala, ezinje ngeCastillo de San Luis. Kuyenzeka ukuba wonwabe emva kwemini emnandi eSelwo Aventura, kumyezo wezilwanyana, okanye undwendwele iziko lobugcisa lamahashe.
KwiConil de la Frontera kunokwenzeka ukuba ukonwabele imeko-bume ethe cwaka kufutshane nee-coves ezintle kunye neelwandle. Idolophu endala intle kakhulu, kunye izindlu ezimhlophe eziqhelekileyo ezineentendelezo ezingaphakathi, ihonjiswe ngeembiza ezizele ziintyatyambo. Ezinye izinto ezinokwenziwa kule dolophu, umzekelo, kukundwendwela ifandesi yeentlanzi ezibukweni, emva koko ungcamle ityhuna emgibeni. Yiya kwintengiso yokutya ukuze ubone iimveliso zabo eziqhelekileyo kwaye uthenge ngeentsuku zentengiso. Akufanele uphoswe ziintsuku ezinelanga kunxweme lwasePontanilla nakwiCala de Aceite.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iidolophu ezintle ezinonxweme zaseAndalusia
Ezona zixeko zibiza kakhulu kwaye zibiza kakhulu eYurophu ukutyelela
Izizathu ezi-5 zokuya eMali ukhangela i-adventure